စမ်းချောင်းရှိရောင်းရန်တိုက်ခန်းများ | iMyanmarHouse.com
ENGLISH | မြန်မာ
ကြော်ငြာတင်ရန် | Login | Sign Up
ကြိုပွိုင့် တိုက်ခန်း ကွန်ဒိုများ
အိမ် ရှာဖွေသူများ Wanted Listing
အိမ် ဝယ်ရန် ရှာဖွေနေသူများ
အိမ် ငှါးရန် ရှာဖွေနေသူများ
Wanted Listing တင်ရန်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရမှု ကိန်းဂဏာန်းများ
စတုရန်းပေမှ ဧက တွက်ချက်ရန်
ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်အိမ်ဆောက်လုပ်လိုသူများအတွက် အထူးအခွင့် အရေး
အိမ်ခြံမြေ ဥပဒေ ဝန်ဆောင်မှုများ
ထိုင်းနိုင်ငံ ဖူးခတ်ကမ်းခြေရှိ နာမည်ကြီး Wyndam ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်း
Myanmar Property Awards
Myanmar Property Awards 2019
Myanmar Property Awards 2018
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရမှု ကိန်းဂဏန်းများ
ထိုင်းနိုင်ငံ ဖူးခတ်ကမ်းခြေရှိ နာမည်ကြီး Wyndam ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွင်
ရောင်းရန် ငှါးရန် ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများ အကျိုးဆောင်များ အဆောင်များ
ရောင်းရန် ငှားရန် ကြိုပွိုင့် အဆောင်များ
မြို့နယ်အားလုံးလမ်းမတော်လသာကျောက်တံတားပန်းပဲတန်းပုဇွန်တောင်အလုံကြည့်မြင်တိုင်စမ်းချောင်းဗဟန်းဗိုလ်တထောင်မင်္ဂလာတောင်ညွန့်တာမွေရန်ကင်းဒဂုံဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းကမာရွတ်အင်းစိန်လှိုင်လှိုင်သာယာမရမ်းကုန်းမင်္ဂလာဒုံမြောက်ဥက္ကလာပတောင်ဥက္ကလာပသင်္ဃန်းကျွန်းသာကေတသံလျင်ဒလဒေါပုံမှော်ဘီလှည်းကူးထန်းတပင်ကော့မှူးခရမ်းကွမ်းခြံကုန်းရွှေပြည်သာတိုက်ကြီးသုံးခွတွံ့တေးကျောက်တန်းဆိပ်ကြီးခနောင်တိုပုလဲမြို့သစ်
အမျိုးအစားအားလုံး တိုက်ခန်း မီနီကွန်ဒို ကွန်ဒို လုံးချင်းအိမ် မြေကွက် ၊ ခြံကွက် ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း စက်မှု့ဇုန် ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင်
ဈေးနှုန်း (မှ)100 (သိန်း)200 (သိန်း)300 (သိန်း)400 (သိန်း)500 (သိန်း)600 (သိန်း)700 (သိန်း)800 (သိန်း)900 (သိန်း)1000 (သိန်း)1500 (သိန်း)2000 (သိန်း)2500 (သိန်း)3000 (သိန်း)3500 (သိန်း)4000 (သိန်း)4500 (သိန်း)5000 (သိန်း)6000 (သိန်း)7000 (သိန်း)8000 (သိန်း)9000 (သိန်း)10000 (သိန်း)15000 (သိန်း)30000 (သိန်း)
ဈေးနှုန်း (အတွင်း)100 (သိန်း)200 (သိန်း)300 (သိန်း)400 (သိန်း)500 (သိန်း)600 (သိန်း)700 (သိန်း)800 (သိန်း)900 (သိန်း)1000 (သိန်း)1500 (သိန်း)2000 (သိန်း)2500 (သိန်း)3000 (သိန်း)3500 (သိန်း)4000 (သိန်း)4500 (သိန်း)5000 (သိန်း)6000 (သိန်း)7000 (သိန်း)8000 (သိန်း)9000 (သိန်း)10000 (သိန်း)15000 (သိန်း)30000 (သိန်း)30000 (သိန်း) နှင့်အထက်
Filter by Property type: တိုက်ခန်း | ကွန်ဒို | လုံးချင်းအိမ် | မြေကွက် ၊ ခြံကွက် | ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း | စက်မှု့ဇုန်
ယခုရွာေဖြမႈနွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေႀကာ္ျငာအသစ္မ်ားကို အသိေပးပါ။
နေ့စဉ် အပတ်စဉ် လစဉ် မပေးပါနှင့်
သိန္း 400 မွ သိန္း 700 ထိ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိရောင်းရန်တိုက်ခန်းများ
ဈေးနှုန်း သိန္း 400 မွ သိန္း 700 ထိ
အလွှာ မြေညီထပ် မြေညီ + ထပ်ခိုး ၁ လွှာ ၂ လွှာ ၃ လွှာ ၄ လွှာ ၅ လွှာ ၆ လွှာ ၇ လွှာ ၈ လွှာ ၉ လွှာ ၁၀ လွှာ ၁၁ လွှာ ၁၂ လွှာ ၁၃ လွှာ ၁၄ လွှာ ၁၅ လွှာ ၁၆ လွှာ ၁၇ လွှာ ၁၈ လွှာ ၁၉ လွှာ ၂၀ လွှာ ၂၁ လွှာ ၂၂ လွှာ ၂၃ လွှာ ၂၄ လွှာ ၂၅ လွှာ
မူလ အတိုင်း (အစီအစဉ်) ဈေးနှုန်း အနည်း မှ အများ အဟောင်း မှ အသစ် အသစ် မှ အဟောင်း
ပေအကျယ်(12.5×50) ၃လွာ တိုက်ခန်းရောင်းမည်။
စမ်းချောင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
565 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10149900 အတွက် သက်တို့အိမ် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
iMyanmarHouse.com တွင် တွေ့သောကြော်ငြာဟု ပြောပါရန်
သက်တို့အိမ် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် ပိတ်ရန်
695 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10192776 အတွက် ေအးခ်မ္းေအာင္ အက်ိဳးေဆာင္ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
09795752270, 09409777902, 09421743343
ေအးခ်မ္းေအာင္ အက်ိဳးေဆာင္ ပိတ်ရန်
စမ်းချောင်းမြို့နယ် အရောင်းခန်း ပါ
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10191349 အတွက် သက်တို့အိမ် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
455 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10192954 အတွက် Moe Myint Thu Realestate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
09420420778, 09420208877, 09766230100, 09254270955, 09777850890
Moe Myint Thu Realestate ပိတ်ရန်
475 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10192623 အတွက် သက်တို့အိမ် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
စမ်းချောင်းမြို့နယ် ဗဟိုလမ်း အနီးက တိုက်ခန်းအရောင်းလေးပါခင်ဗျာ
480 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10192086 အတွက် စမ္းေခ်ာင္း အက်ဳိးေဆာင္ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
095110536, 09455110536, 09965110536, 09765110536
စမ္းေခ်ာင္း အက်ဳိးေဆာင္ ပိတ်ရန်
စမ်းချောင်းမြို့နယ် ကျွန်းတောလမ်း နှင့် ဗဟိုလမ်း လမ်းသွယ် လမ်းကျယ်ရှိ တိုက်ခန်းရောင်းမည်။...
635 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10192012 အတွက် စမ္းေခ်ာင္း အက်ဳိးေဆာင္ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
စမ်းချောင်းမြို့နယ် ကျွန်းတောလမ်း အနီးရှိ တိုက်ခန်းအရောင်းလေးပါခင်ဗျာ
595 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10191962 အတွက် စမ္းေခ်ာင္း အက်ဳိးေဆာင္ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
စမ်းချောင်းမြို့နယ် ဗဟိုလမ်းမအနီးရှိ တိုက်ခန်း ရောင်းမည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10191515 အတွက် Sai Ta Khon Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Sai Ta Khon Real Estate ပိတ်ရန်
စမ်းချောင်းမြို့နယ် Junction. Square အနီးရှိ တိုက်ခန်း ရောင်းမည်။
430 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10190859 အတွက် Sai Ta Khon Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
စမ်းချောင်းမြို့နယ် ဝါးခယ်မလမ်းရှိ တိုက်ခန်းအား ညှိနှိုင်းဈေးဖြင့်ရောင်းရန်ရှိသည်။
650 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10190098 အတွက် လဝန်းရှင် အိမ်ခြံမြေ ဝန်ဆောင်မူလုပ်ငန်း သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
095188025, 09798464726, 09798892235, 09796281915
လဝန်းရှင် အိမ်ခြံမြေ ဝန်ဆောင်မူလုပ်ငန်း ပိတ်ရန်
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့စည်ကားတဲ့ မြို့နယ်တွေထဲမှာ စမ်းချောင်းမြို့နယ်သည် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး လူသွားလူလာ ၂၄ နာရီ မပြတ်သည့်မြို့နယ်ဟုဆိုနိုင်သည် ။ မြို့နယ်၏ မြောက်ဘက်တွင် ကမာရွတ်မြို့နယ် ၊ အရှေ့ဘက်တွင် ဗဟန်းမြို့နယ် ၊ အနောက်ဘက်တွင် ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ၊ တောင်ဘက်တွင် ဒဂုံနှင့်အလုံမြို့နယ် တို့ဖြင့်ဝန်းရံတည်ရှိလျက်ရှိသည် ။ ဈေးဝယ်စင်တာ ၊ စူပါမားကတ် ၊ စီးတီမတ် ၊ စားသောက်ဆိုင်များ နှင့် ၂၄ နာရီဖွင့်သောဆိုင်များ ရှိသဖြင့် စမ်းချောင်းမြို့နယ်သည် စည်ကားနေရခြင်း ဖြစ်သည် ။ မြေနီကုန်းမီးပွိုင့်အနီးရှိ ဒဂုံစင်တာ ၊ ဒဂုံစင်တာ ၂ ၊ ဂမုန်းပွင့် ၊ စီတီးမတ် တို့သည် ရန်ကုန်မြို့တွင်း လူကြိုက်များသွားရောက်မှုများသည့် ဈေးဝယ်စင်တာများဖြစ်ပြီး အဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံများလည်းတည်ရှိသည် ။ ရန်ကုန်မြို့၏ အဓိကပြည်လမ်းမကြီးနှင့်လည်း နီးကပ်ထိဆက်သည့်မြို့နယ်ဖြစ်သလို ရပ်ကွက်တွင်း ရှည်လျားသော စမ်းချောင်းလမ်းမကြီးလည်းတည်ရှိသည် ။ စမ်းချောင်းလမ်းမကြီးသည် မြို့နယ်၏ရပ်ကွက်တွင်း ဆိုပေမယ့် အဝတ်အထည်ဆိုင်များ ၊ ဆိုင်ခန်းများ ၊ ရုံးခန်းအချို့နှင့် စားသောက်ဆိုင်များပေါများလွန်းသဖြင့် တိုးမပေါက်အောင်စည်ကားသောလမ်းမကြီးလည်းဖြစ်ပေသည် ။ ဗားကရာလမ်းမပေါ်တွင်တည်ရှိသည့် ကိုးထပ်ကြီးဘုရားသည်လည်း ရန်ကုန်မြို့တွင်း အထင်ကရ ကိုးကွယ်သည့် ဘုရားကျောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် ။ ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်လျင်လည်း စမ်းချောင်း အထက်တန်းကျောင်းများသည် အထင်ကရတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်ပြီး မူလတန်းကျောင်း ၁၇ ကျောင်း ၊ အလယ်တန်းကျောင်း ၂ ကျောင်းနှင်အထက်တန်းကျောင်း ၄ ကျောင်းတည်ရှိသည် ။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော် စမ်းချောင်းမြို့နယ်သည် လူနေထူထပ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့၏ အစည်ကားဆုံးမြို့နယ်လို့ဆိုနိုင်သလို လူနေတိုက်ခန်းများ ၊ ကွန်ဒိုများ ၊ လုံးချင်းအိမ်များ ၊ ဆိုင်ခန်းနှင့်ရုံးခန်း ပေါများပြီး သွားလာရလွယ်ကူအဆင်ပြေသောမြို့နယ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေသည် ။
What Is iMyanmarHouse?
Regions In Myanmar
Copyright © 2022 iMyanmarHouse.com. All Rights Reserved.
Cars for Sale Myanmar
Voiture au Maroc
Comprar Carros Angola
House for Sale in Nigeria
Property for Rent in Ghana
Condos for Sale Makati
Lanka Property Web
Casa para Venda Angola
Houses for Rent in Tanzania